[OKUFANELE] Isipele Sedatha ye-Android & Buyisela - Isipele se-Android Sokubuyisa / Ukubuka kuqala
Isipele Sedatha ye-AndroidK futhi Buyisela
Backup Idatha yefoni ye-Android kuya kwikhompyutha (iWindows ne-Mac).
Buyisela Isipele kufoni ye-Android ngaphandle kokubhala idatha yokuqala yocingo.
Buka kuqala idatha bese Ukhethelela Ngokukhethekile & Buyisela Imininingwane.
Backup Idatha yedivayisi ye-Android ku-Windows naku-Mac
Isipele Sedatha ye-Android & Buyisela yisoftware engcono kakhulu yesithathu yabasebenzisi be-Android ukuze Backup idatha yabo kuWindows noma Mac. Ukuchofoza okukodwa nje Ungabhekhapha yonke idatha ye-android kwikhompyutha (Bheka ukuthi iyiphi idatha ongayenza ukuze wenze isipele). Ngayo ungakha isipele izithombe, oxhumana nabo, amavidiyo ngezikhathi ezithile ocingweni lwakho futhi akudingeki ukhathazeke ngokulahlekelwa yizo. Vele uxhume ifoni yakho kwikhompyutha bese wenza ibhekhaphu manje!
Buyisela i-Backuped Idatha kudivayisi ye-Android
Ngokugcina isipele sangaphambilini, ungababuyisela kwifoni ye-Android kalula. Ungakhetha ukubuyisela leyo datha oyifunayo kudivayisi. Futhi sicela wazi ukuthi, idatha ebuyiselwe kusuka kusipele ngeke ibhale idatha esecingweni lwakho, okuwusizo kakhulu kithi lapho nje sifuna ukudlulisa idatha ethile yesipele kuye kufoni yethu. Isekela cishe bonke abenzi beDivaysi ye-Android (Hlola ukuthi Kuthengeliswa Yiphi Brand).
Amamodeli wedivayisi asekelwayo nedatha
Samsung • HTC • HUAWEI • Google (Nexus) • LG • ISONY • OnePlus • XiaoMi • OPPO • VIVO • Moto • Lenovo nokuningi
Leli thuluzi lisekela wonke amamodeli efoni asebenzisa i-Android OS.
Uhlobo lwefayela elixhasiwe
Oxhumana Nabo • Imiyalezo • Izingodo Zokushayela • Igalari • Amavidiyo • Umsindo • Imibhalo
Isiphathi sedatha yefoni ehamba phambili ye-Android ku-Windows naku-Mac
Landa Isipele Sedatha ye-Android uphinde ubuyisele Manje!
Angijwayele ukwenza isipele idatha kuseva yefu, angicabangi ukuthi leyo inketho (ephephile) inketho yethu yokwenza lokho. Ngakho-ke ngihlala ngigcina idatha ye-backup kwikhompyutha yami. Kuyangisiza ukwenza lokho.
Umkami uthengise iSAMSUNG C5 wathenga ifoni entsha ye-HUAWEI, ngakho-ke ngaphambi kokuthi kufike ifoni entsha, ngicele idatha yakhe ngiyibuyisele ocingweni lwami. Ukuze akwazi ukuhamba ngezinsuku lapho elindile.
Sikhiqiza idatha ethe xaxa kwifoni yethu, uma usebenzisa insizakalo yokusekelayo evela kumenzi wefoni, kufanele ukhokhe ngaphezulu. Ngakho-ke leli thuluzi likhululekile kulesi sici.
Ungawenza kanjani isipele Umculo kusuka ku-Android Ucingo kuya ku-PC
Ungawenza kanjani isipele iVidiyo kusuka ku-Android Ucingo kuya kwi-PC
Ungawenza Kanjani Isipele Sefoni ye-Android
Isipele Imilayezo ye-WhatsApp kusuka ku-Android kuya ku-PC
Isipele se-SMS se-Android & Buyisela
Isipele se-Android nokubuyiselwa
Ungawugcina Kanjani Idatha Yefoni Ye-Samsung Galaxy S
Ungawagcina Kanjani Oxhumana Nabo ku-Samsung Galaxy S Ucingo
Ungawugcina Kanjani Umlayezo Wombhalo ku-Samsung Galaxy S Ucingo
Ungawugcina Kanjani Log Log kusuka ku-Android kuya ku-PC
Ungawenza Kanjani Isipele se-PC ku-PC Ku-2018
#1 Ithuluzi lesipele le-SMS le-Android - i-1 Chofoza i-Backup SMS kusuka ku-Android kuya ku-PC
Ungawagcina Kanjani Oxhumana Nabo Kusebenza Kwizingcingo kwifoni ye-Android